Qarax khasaare gaystay oo Muqdisho ka dhacay | KEYDMEDIA ENGLISH
Qarax khasaare gaystay oo Muqdisho ka dhacay
Waxaa duhurnimadii maanta degamada Kaxda ee gobolka banaadir ka dhacay qarax miino, kaas oo gaystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
MUQDISHO, Soomaaliya- Qaraxa maanta ka dhacay degmada Kaxda, ayaa waxaa gaarigiisa loogu xiray Gudoomiye ku xigeenka waaxda 4-aad ee degmadaas, kaas oo markii danbe u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qaraxa.
Qaraxan oo ka dhacay gudaha degmada Kaxda ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay labbo qof, kuwaas oo marayey wadada hareeraheeda.
Dadka dhaawacmay oo ah kuwa rayid ah, ayaa iminka xaaladooda caafimaad lagula tacaalayaa mid ka mid ah xarumaha caafimaadka Muqdisho, inkasta uu dhaawacoodu fudud yahay.
Gudoomiyaha Degmada Kaxda Maxamed Yuusuf, oo aan qadka taleefanka kula xiriirnay, ayaa inoo xaqiijiyey geerida gudoomiye ku xigeenka waaxda 4-aad ee degmadaasi, isagoo xusay in ay ku raad joogaan kooxihii qaraxaasi ka danbeeyey.
Ma jirto cid sheegatay masuuliyada qaraxa lagu dilay gudoomiye ku xigeenka waaxda 4-aad ee degmada Kaxda, waxaase weerarada ceynkan oo kala Muqdisho ka fuliya kooxda Al Shabaab, oo xiriir la leh ururka Al-Qaacida.
Dayac xooggan ayaa xilligan ka muuqda amniga Muqdisho, waxaana kordhay dilalka qorsheysan iyo qaraxyada, halka hay'adihii amniga ku shaqada lahaa ay ka seexdeen wax ka qabashada amni darrada isi-soo tareysa.